Waa maxay macnaha account cusub ee ganacsiga cannabis sharci?
News iyo Isbedellada Socda / hemp
By sharciyeeysay hemp, Bill Farm ayaa abuuray ilo sharci ah oo CBD.
search fudud. waa helaa tayo leh. Your lamaanahaaga iyo portal digital bulshada cannabis ah.
10 January 2019 4 read more
fikradaha Kaganacsiga Green- shaqaalaha isu yihiin.
Bill Farm The, saxiixay bishii December 2018, maakt de weg vrij voor CBD-producten om legaal te worden in het hele land – althans, in ay tahay rajada ah qareenada warshadaha marijuana ah.
Haddii ay taasi waa sida ay xaaladda u muuqanayo, this ka saari lahaa madmadowga in uu sii waday in ay alaabta CBD ganaax tan iyo dalalka bilaabay sharciyeeysay marijuana, bilaabaan in Colorado 2014. Taasi waa sababta oo ah dawladda federaalka ah ayaa weli ku qoran marijuana sida sharci darada ah ah jadwalka I- daroogada ee Xeerka ashyaada, marka lagu daro cocaine iyo heroin.
By sharciyeeysay hemp ee Bill Farm ah, leeyihiin Congress Maraykanka iyo Madaxweynaha albaabka u furay inuu waxyaabaha CBD, kuwaas oo ka soo jeeda cannabis. Inta badan waxaa ka mid ah waxay ku xiran tahay waxa dalalka ay go'aansadaan in ay sameeyaan.
Laakiin awood jirta. Colleen Keahey, Madaxweynaha Industry Association hemp ku, Wararka Consumer sheegay in sharciyeeysay hemp ee Maraykanka micnaheedu noqon karaa in ay ka dhigan tahay labanlaabay ama ku qaatao ee wax soo saarka gudaha sanad gudihii.
la xiriira: Waayeelka Ma suuqa cannabis shirkadaha yar on diiradda
Waa maxay waxyaabaha CBD?
Op dit punt zou de vraag kunnen zijn “wat zijn geen CBD-producten?” CBD, oo waxay u taagan tahay cannabidiol, illaa iyo hadda la maamulo ee gummies, nacnac, shukulaatada, kafeega, biyaha, xayawaanka cunto, menu-waxyaabaha spéciale maqaayadaha, labeen, saliidda, badkuipen – de lijst gaat maar door.
Waa maxay sababta ay caanka ah? Tan iyo CBD ayaa lagu helay in ay tabardaro madax-xanuun, myalgia, Qabqabashada muddo, xanuun joogto ah, welka iyo xataa niyad jab. Athletes ayaa meelmariyey isticmaalka ka hor iyo ka dib tababarka labada.
CBD sidoo kale waa qayb ah Epidiolex, ansixiyey sanadkan by Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka federaalka si loo daaweeyo qalal loogu talagalay dadka ka cabanaya labo ka mid ah noocyada ugu daran ee qalalka. Waa daroogada ugu horeysay ansixiyey FDA la derivative ka mid ah cannabis iyo signal a Doodu Agency Enforcement Daroogada, ugu yaraan marka la eego isticmaalka dawooyinka ee CBD, FDA.
Belangrijk is dat CBD de chemische stof in marihuana is die niet het “hoge gevoel” veroorzaakt (THC in). Tani waxay kala duwanaan muhiim ah marka ay timaado ka fiirsaneysa Bill Farm ah.
la xiriira: Federaalka Cannabis Mamnuucidda ahayd badan oo taharyar junuud 2018
Hemp la sameeyo sharci
Waxaa ag marayay biilka beerta by Senate siiyey hogaamiyaha Jamhuuriga aqlabiyad Mitch McConnell bixinta ah in hemp gudaha ahaa sharci. Waxay ka caawisaa in gobolka uu guriga of Kentucky ee 2017 oo keliya 16 milyan oo dollar hemp iibin hoos staatspilpprogramma kaas oo ay taageereen McConnell.
de Madaxweynaha saxiixay xataa biilka qalin of hemp sameeyo oo cultured in Kentucky bixiyo McConnell.
Afka ka mid ah ashyaada la ilaaliyo Act beddelay in meesha laga saaro hemp
sida fiirsanayo in Rolling Stone, waxay muujinaysaa in qaar ka mid ah la hubin oo ku saabsan sida USDA waxay dib u eegi doonaan qorshaha gobolka iyo in tani waxay noqon kartaa caqabad weyn. Haddii dalalka ha soo gudbiso qorshe, saarayaasha shakhsi xaq u leedahay inaad si toos ah qorshe soo gudbiyaan xukuumadda federaalka.
In calaamad u tahay muhiimadda isbeddelka, Colorado ku salaysan Charlotte ayaa Web magacaabay Eugenio Mendez sida sarkaal sare koritaanka shirkadda. Charlotte ayaa Web waa qof ku taqasustay soo saarayo alaab fayoqabka CBD-maragyo, oo ay ku jiraan cabitaannada. Mendez hore ahaa madaxweyne ku-xigeenka of marketing caalamiga ah biyo, biyaha hagaagay- iyo ciyaaraha cabitaanka ee Coca-Cola.
Raac on dispensaries.com I nstagram ku saabsan on height iyadoo wararkii ugu dambeeyay cannabis joogo.